Al-Shabaab oo meel fagaare ah ku toogatay Cabdishakuur Muxumed | Dalkaan.com
Home Warkii Al-Shabaab oo meel fagaare ah ku toogatay Cabdishakuur Muxumed
Beledweyne (dalkaan) – Dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa shalay gelinkii dambe toogasho ku fuliyey Cabdishakuur Muxumed Axmed oo ay ku eedeeyeen inuu fara xumeeyey canug yar, sida ay shaacisay maxkamad hoostagta isla kooxdaasi.
Fagaaraha lagu toogtay marxuumka oo ku yaalla deegaanka Booco ee bariga gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku sugnaa xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo boqolaal dadweyne ah oo la’isugu yeeray halkaasi, su ay goobjoog uga noqdaan halka lagu toogtay ninkaasi.
Maxkamadda Al-Shabaab ayaa sheegtay Cabdishakuur Maxamed uu ‘canug yar ku sameeyey falkii Qowmuluud, isla-markaana uu qirtay, sida ay hadalka u dhigtay.
Cabdishakuur ayaa ahaa nin dhalinyaro ah, isla-markaana ka mid ahaa dadka deegaanka, waxaana si weyn looga yaqiinay halkaasi.
Dhowaan ayey aheyd markii deegaaanka Shaw ee dhaca galbeedka gobolka Hiiraan ay Al-Shabaab xukun dil ah ka fulisay, kaas oo lagu ridday haweeney ay ku eedeeyeen inay ka tirsaneyd ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee HirShabelle.
Inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa deegaanada ay gacanta ku hayso ee ku yaalla koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya ka fulisa xukuno u badan dilal toogasho ah, kuwaas oo maalmihii dambe ay kordhisay, waxayna ay ka dhacayeen gobollo kala duwan.
Previous articleMadaxda Manchester United oo u sheegay wakiilada Ole Gunnar Solskjaer go’ankooda Ku aadan Macalinka
Daawo: Midowga Musharixiinta oo shaaciyey hal fursad oo ay Rooble siiyeen
Maxey ku kala duwanaan doonaan gulufkii hore ee Badbaado Qaran iyo midka cusub ee mucaaradku rabaan?
DEG DEG: Qodobo kasoo baxay shirkii Rooble iyo Midowga Musharaxiinta + Sawirro
Qodobo kasoo baxay shirkii R/W Rooble iyo Midowga Musharaxiinta + Sawirro
DEG DEG: Deni oo hanjabaad culus kasoo saaray tallaabadii ay qaadeen ciidamada daraawiishta
Wakiilka Ousmane Dembele oo la xiriiray Newcastle United, Juventus’
Wakiilka xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Barcelona ee Ousmane Dembele ayaa lagu soo waramayaa in uu bilaabay xiriir uu la sameeyay kooxaha Juventus iyo Newcastle United . In kasta oo uu ku...
Guushii Manchester United ee Tottenham oo Xaqiiqooyin Cusub laga Diiwaangaliyay
Mahad Salaad oo arrin yaab leh usoo jeediyey Sheekh Shaakir
Xog: Farmaajo oo isku dayaya inuu olole siyaasadeed ka dhigto guusha...
Aqriso: Nuxurka khudbada Swan ee shirka Soomaaliya ee Golaha Ammaanka QM
Chelsea 1-1 Manchester United: Blues iyo Red Devils oo ku Heshiiyay...
3 qodob oo laga soo saaray shir xasaasi oo ay yeesheen...
dalkaan_2ujpzr - November 10, 2021 0